Momba ny fampianaran’ny Eglizy mahakasika ny fiarahamonina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Rasoanjanahary il y a 5 années
Natolotra tao Antanimena Antananarivo tamin’ny sabotsy 22 febiroary 2014 ny boky mitondra ny lohateny hoe “Fampianaran’ny Eglizy katôlika momba ny fiaraha-monina sy ny sôsialy”, tao anatina famelabelaran-kevitra nataon’ireo raiamandreny am-panahy notsongaina tato amin’ny Fiangonana.
Fitaovana manampy amin’ny famakiana ny hevitry zava-misy
“Fitaovana ilaina ho an’ny soa iombonana ity tahirin-kevitra mirakitra ny Fampianaran’ny Eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy ity”, hoy ny solontenan’ny Papa, i Mgr Eugène Martin Nugent. Izy no nasaina nanolotra voalohany ny boky. “Tahirin-kevitra voafintina kanefa feno”, hoy izy. Mirakitra ny foto-kevi-dehibe enti-mandinika sy mitsara ka hahafahana mahita ny lalan-kaleha eo amin’ny fampandrosoana ny maha olona manontolo. Fitaovana itoriana ny Evanjely. Mifototra amin’ny lalàna voajanahary sy ny didim-pitiavan’i Jesoa. Manampy ny olombelona tsirairay hahita an’Andriamanitra. Notanisainy ny foto-kevi-dehibe voarakitra amin’ity tahirin-kevitra. Anisan’ireny ny fanajana ny hasin’ny maha olona sy ny zon’olombelona, ny firaisankina, ny soa iombonana, ny fandraisana anjara amin’ny raharaham-bahoaka. Tsy mihambo ho mitondra vahaolana tekinika amin’ny olam-piaraha-monina ity raki-kevitra ity. Fa manampy kosa ireo olona tsara sitrapo amin’ny famakiana ny dikan’ny zava-misy. “Tsy resaka lalana fahatelo eo anelanelan’ny kapitalisma sy ny sosialisma anefa izy ity, hoy ny solontenan’ny Papa, fa fandinihana ny zava-misy amin’ny fanilovan’ny Fanahy Masina, araka ny Evanjely”. “Ny tanjona, hoy izy, dia ny fanoroana lalana ny kristianina mba hananany fitondran-tena mifandraika amin’ny fampianaran’ny Evanjely, izay i Kristy no ivony”. Hanorenana fiarahamonina anjakan’ny rariny sy ivelaran’ny maha olona amin’ny lafiny rehetra fa tsy hoe fahazoana ihany ny fitaovana materialy na ny fisongan’ny harin-karena.
Zava-dehibe ny anjara toeran’ny fianakaviana
“Tsy fampianarana no ataoko, hoy kosa i Mgr Benjamin Ramaroson, fa fanolorana ny foto-kevi-dehibe amin’ny toko faha 5 mikasika indrindra ny fianakaviana sy ny fanabeazana”. Izy moa no filohan’ny vaomiera episkopaly momba ny fanabeazana. Nomarihany fa mifanandrify amin’ny fandinihan’ny any Roma mikasika ny fianakaviana ny namoahana ity raki-kevitra ity sady taonan’ny fianakaviana rahateo ity taona ity. Zavatra telo àry no nisarihany ny saina.
Voalohany ny zava-misy mikasika ny fianakaviana izay mandalo fotoan-tsarotra. “Voazimbazimba ny fianakaviana izay fototry ny ankohonan’olombelona”, hoy izy.
Faharoa, notsiahivin’i Mgr Benjamin fa reny sady mpanabe ny Fiangonana, izany hoe mikolokolo sy milaza ny marina mba haha olona afaka antsika. Nambarany fa tsy vahaolana vita fonosana no voarakitry ny boky. “Tsy toa ny fanaovana trano ‘pré-fabriqué’ izy ity, hoy izy, satria olombelona no voakasika”. Fa torolalana kosa natao hanampy antsika hiroso amin’ny lalana marina. Ny maha olona no jerena ary miainga amin’ny fanabeazana ao anivon’ny fianakaviana izany.
Fahatelo, fanamby miandry ny tokony hahaizana mampiasa ny boky amin’ny maha fitaovana azy izay tokony hipaka any amin’ny rehetra.
Firotsahan’ny lahika sy demokirasia
“Ny batemy noraisina no miantso ny lahika hirotsaka amin’ny politika, hoy i mompera Germain Rajoelison, vikera jeneralin’Ambatondrazaka sy aomonien’ny “Justice et paix”. Notanisainy ny teboka mifandraika amin’ny firotsahan’ny lahika ao amin’ny raki-kevitra. Notsiahiviny fa lalivay sy fanasin’ny tany ny lahika ary asa fanompoana ny firotsahana eo amin’ny fiarahamonina, fanompoana ny hafa. Iainana ny asa fitiava-namana (jereo n°545). Ampiharana ny fitsipika momba ny soatoavina moraly (jereo n°568). Momba ny fiaraha-monina demokratika sy ny fitondram-bahoaka, mazava ny torolalana ao amin’ny tahirin-kavitra, ary mandray anjara amin’izany ny Fiangonana (jereo n°412). Notsindriany mafy ny resaka fahamailoana sy fandanjalanjana eo amin’ny fakana fanapahan-kevitra sy izay hatao (jereo n°573). Manampy amin’ny fijoroana ho vavolombelona ny raki-kevitra ho an’ireo katolika mirotsaka any anivon’ny rafi-panjakana, toy ny Antenimieram-pirenena. “Manaiky ny rafitra demokiratika ny Fiangonana, hoy i mompera Germain, fa izany kosa dia tsy mifandaka amin’ny fanajana ny soatoavina toy ny tsy fandavana an’Andriamanitra”.
Ady hevitra misokatra
Ny Profesora Raymond Ranjeva, mpahay lalàna, dia nilaza fa natao ho an’ny olon-kendry ny fandinihana ity raki-pampianarana ity. Ny konsiansy no iaingan’ny zavatra atao fa tsy sanatria natao ho an’ny olona minomino foana. Olona afaka amin’ny geja, olona manana finiavana sy tsy mihinana amam-bolony, mahay mandanjalanja sy mandinika. Tsy tahaka ny “boky mena”, hoy izy, ity raki-pampianarana ity fa ilana fandanjalanjana lalina ny fampiasana azy izay mifototra amin’ny fijerena ny marina sy ny rariny, amin’ny fahamarinana sy ny fampihavanana.
Ny solombavamboaka mpikatroka katolika iray dia nanamarika fa ny fiarahana mandray andraikitra no andikany ny resaka mira lenta fa tsy ilay resaka mifanohitra amin’ny lalàn’ny natiora voizin’ny sasany. Hanompo ny vahoaka no irotsahana ao amin’ny Antenimera, hoy izy, kanefa indraindray sahirana ihany manoloana ny baikon’antoko. Naneho ny hetahetany izy ny amin’ny mba hananan’ny mpanao politika pretra aomonie, mba tsy hibirioka amin’ny lalana tokony halehany. Novalian’i Mgr Benjamin io faniriana io ary nomarihany fa misy ny fomba atao raha ilaina tokoa ny hisian’izany. Notsindriany anefa fa mifototra amin’ny fampianaran’i Kristy ity tahirin-kevitra ity, ary olona manana konsiansy no mampiasa azy. Misy fenitra tsy azo dikaina ny zavatra rehetra voarakitra ao. Tsy azo atao ohatra ny fanalan-jaza izay mamono ny aina.
Ny sendikalista Ravoavy Michel ao amin’ny sendika kristianina dia nandefa soso-kevitra ny hanapariahana ny raki-kevitra amin’ny fomba rehetra mba hahamora ny famakiana azy.
Nisy mpino protestanta iray koa nandray fitenenana. Nomarihiny fa tena miparasaka tokoa ankehitriny ny ankohonana. Ao ny ray aman-dreny mivaro-janaka. Hita koa ny olona mitonon-tena ho kristianina kanefa ny atao tsy araka izany. Niaiky izy fa manampy amin’ny fanarenana izany ny raki-kevitra, azo ahitana tsara ny fepetra raisina manoloana ny fitsipika mifehy ny antoko mety mampisalasala.
Ny mpampianatra amin’ny politekinika Razanatsimba Gabriel Marie kosa dia nanipika fa misy tsy mety ny fanarahana ny fenitra isan-karazany eto amintsika na dia lazaina aza fa “manara-penitra daholo izao rehetra izao”. Noraisiny ho ohatra ny fahapotehan’ny fianakaviana. Nolazany mazava ny zavatra tiany ho an’ny zanany, dia ny haha olom-banona azy ireo.
Tsara ho fantatra momba ny boky
Mirefy 17 x 24 sm ny boky “Fampianaran’ny Eglizy katôlika momba ny fiaraha-monina sy ny sôsialy”, misy takila 511 ankoatra ny fonony.
Boky nadika teny malagasy avy amin’ny teny frantsay. Notontosain’ny Vaomiera episkopaly “Justice et Paix” eto Madagasikara ary navoakan’ny Edisiona Md Paoly Antananarivo. Hita ao amin’ny fiandohana ny taratasin’ny Kardinaly Sodano, sekireteram-panjakana, milaza ny antonanton’ny boky tamin’ny taona 2004, nivoahany voalohany. Ny Papa Joany Paoly faharoa no nipoiran’ny hevitra nandrafetana azy. Ao ihany koa ny fanolorana ny boky. Misy fizarana telo sy toko 12 ny izy iray manontolo, ankoatra ny famaranana. Ahitana teboka misy laharana na nomerao 583 (pejy 12-336). Ahitana fanondroana ny andinin-tSoratra Masina sy tahirin-kevitry ny Eglizy samihafa (pejy 337-356). Eo ihany koa ny fanondroana ny antsipirian’ny isan-teny (pejy 357-502) manamora ny fahitana ny lohahevitra tiana hovakiana.
Ny “Justice et Paix” eto Madagasikara no nisongadina nandritra ny fanolorana. Nitarika ny fotoana i mgr Roger Victor Rakotondrajao, filohan’ny Vaomiera episkopaly momba izany. Nanentana kosa i mompera Alain Thierry Raharison, sekiretera jeneralin’io. Saika nahatonga solontena avokoa ireo diosezy tamin’io andro nanolorana ny boky io, nahitana pretra aomonie sy lahika mpiara-miasa. Teo ihany koa ny pretra sy relijiozy, lahy sy vavy ary lahika mpikatroka samihafa tonga nanoina ny antso. Nisy minisitra sy solombavambahoaka avy amin’ny fitondram-panjakana aza. Nafanain’ny tarik’i Haga tamin’ny hira fanentanana mifandraika amin’ny asa fanirahana ataon’ny Fiangonana ny fotoana.